Fanafihana mitam-piadiana-Kalaky 02, PA 04, Makarov 01 no mbola karohina -
AccueilRaharaham-pirenenaFanafihana mitam-piadiana-Kalaky 02, PA 04, Makarov 01 no mbola karohina
24/02/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Dimy ambin’ny folo taona aty aoriana dia mbola tsy misy tafaverina any amin’ireo mpitandro ny filaminana ireo basy very tamin’ireny fanonganam-panjakana niseho teto Madagasikara nandritra ny taona nifanesy.
Kalaky roa, PA miisa efatra, Makarov iray, no basy mahery vaika karohina fatratra amin’izao fotoana izao. Ireo basy ireo dia very nandritra ny korontana nisy teto amin’ny firenena. Ireo kalaky manokana, dia nanjavona teny am-pelatanan’ireo mpitandro ny filaminana nandritra ny fifanandrinana tamin’ny filoha teo aloha sy ny filohan’ny Tetezamita ny taona 2009. Maromaro no niparitaka tamin’izany ary teny am-pelatanan’ireo sivily. Ny iray tamin’ireo kalaky ireo dia sarona teny Anosipatrana, teny amin’ny lehilahy iray ny taon-dasa teo, ary efa saika namidiny . Efa nampidirina eny am-ponja ity farany, ary mbola mamita sazy eny amin’izao fotoana izao. “ Ny ankamaroan’ireo basy ireo, dia misy mivarotra amin’ny dahalo any Atsimo na atakalo omby. Porofon’izany, rehefa misy dahalo lavon’ny zandary, dia mitovitovy amin’ireo basy tadiavina ireo no hita , saingy efa nokikisana ny nomeraony”, raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra iray. Fantatra ihany koa fa ny basy very tamin’ny korontana politika, tamin’ny taona 1975, dia tamin’ny telo taona lasa vao tratran’ny manam-pahefana teny am-pelatanan’ireo dahalo.
Tsapa araka izany, fa zava-doza ny vokatry ny savorovoro sy korontana ara-politika, satria misy foana ny fiparitahan’ny fitaovam-piadiana izay tsy voafehy mihitsy dimy ambin’ny folo taona aty aoriana. Mibaribary amin’ny fanafihan-jiolahy sy dahalo mitranga eto Madagasikara izany. Saika mirongo fitovam-piadiana mahery vaika avokoa mantsy ireo olon-dratsy ireo amin’izao fotoana izao rehefa manao ny asa ratsiny. Efa maro ihany ny basy tratran’ireo manam-pahefana teny am-pelatanan’izy ireo isan-taona saingy mbola hita mivaingana ny fahabangan’ireo fitaovam-piadiana mbola karohina ireo. Ny angom-baovao natao no nahalalana fa ny fanonganam-panjakana tamin’ny taona 2002 sy 2009 no nahitana fiparitahan’ny fitaovam-piadiana betsaka indrindra. Nanampy trotraka ny fahavakisan’ny fitehirizana bala tamina toby miaramila iray tamin’ny taona 2009. Tsy mahagaga raha mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana amin’izao fotoana izao. Azo antoka mantsy fa mbola isan’ireo basy karohina, no ampiasain’ireo olon-dratsy entina hanatanterahana ny asa ratsy mitranga eto andrenivohitra sy any amin’ny faritany. Misy akony be dia be amin’ny fiainam-pirenena noho izany ny fanonganam-panjakana, ka tokony sorohana mba tsy hisian’ny fahaverezana basy sy fitaovam-piadiana maro samihafa, izay entin’ireo manam-pahefana hanatanterahana ny asany.
Lalan’i Mantasoa : Nanokanan’ny Fanjakana 700 tapitrisa Ar
Tsy nisy nikitika sy nanamboatra mihitsy ny lalan’i Mantasoa raha tsy tamin’izao Fitondran’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina izao. Araka izany, dia nanokanan’ny Fanjakana 700 tapitrisa Ar ny fanamboarana tanteraka ny lalan’i Mantasoa miainga avy eo Ambatoloana ...Tohiny
Sekoly tsy miankina : MIISA 158 NO METY HAMERIM-BOLA
Kidnapping 1991-2018 : Maherin’ny 1000 Miliara Fmg
Fanitarana ny “ port’’ Toamasina : Nampiseho fahavononana ny Japonay